Tag: nbudata | Martech Zone
Ezigbo enyi m ruo ọtụtụ afọ bụ Steve Woodruff, onye kwupụtara (ma nwee ezigbo onyinye) Clarity Consultant, na-aga n'ihu ịkekọrịta ụfọdụ ịkwa emo-na-ekwu okwu n'etiti weebụsaịtị na profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ kọọrọ m oge kachasị amasị m site na afọ ole na ole gara aga: Anyị emeela ọsụ ụzọ ọhụrụ maka nkwado, ịzụ ahịa nke ndị ahịa na-adabere n'ụkpụrụ nke usoro mgbanwe mgbagwoju anya. Nke a bụ atụmatụ ọhụrụ maka atụmatụ maka ụwa na-enwe mgbanwe mgbanwe miri emi:
Wednesday, November 26, 2014 Tọzdee, Disemba 2, 2014 Douglas Karr
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbasi mbọ ike ịhazi ma zụlite usoro usoro azụmaahịa na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa ha. Ihe omuma ihe omuma a site na g2m solutions bu nchikota nke uzo ahia B2B nke ha weputara na akwukwo nke Akwukwo ROI ha. SMART Approach to Marketing Analytics SMART bu okwu acronym maka uzo di nma na ahia ahia obula: Họrọ Ihe iji tụọ ya Nyochaa Nchoputa Nchoputa Ghari mmegharia Ule nke Uzo nke